DAAWO: Fadeexad Maaliyadeed oo hareysay Hay’addaha DFS, soona afjartay guulihii Farmaajo & Kheyre sheegeen.
MUQDISHO(P-TIMES) – Warbixintii sidda sharciga ah loogu baahiyey barta rasmiga ah ee Hanti dhawrka Soomaaliya iyo warbaahinta dawladdaba, waxay muujisay waji gabax weyn oo ku dhacay madaxda dawlada Faderaalka Soomaaliya oo shalayba qaarkood ay ku faaneen daahfurnaan maaliyadeed in la gaaray.
Warbixinta waxay aad uga hadleysay lunsashada Aduun ka badan 20Malyan oo Dollar oo ay lunsadeen Hay’addaha kala duwan 18Malyan oo kamid ah aan la aqoonin meesha ay martay gabi ahaanba.
Falanqeeyaasha arrimaha dhaqaalaha ayaa rumeysan in talaabadan oo kale ay dawlado badan isku casilaan oo ay madaxdu baneeyaan xilalka u sareeya, waxaana muuqata in xaaladdu ay hadda gabaabsi tahay.
HALKAAN KA DAAWO WARBIXIN LAGA DIYAARIYEY
Madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ku faanay shalay in ay gaareen horumar dhaqaale, laakiin marnaba ma uusan soo qaadin warbixinta fadeexaddu hareysay ee musuqmaasuqa oo dawladdiisa ay dhexda u taagan tahay.
In la lunsado deeqda Caalamka ayaa kamid ah arrimaha warbixinta sida cad uga muuqday, sidaas oo kale Heshiisyada Xaafiiska Raysalwasaaraha ayaa la sheegay in ay dhamaantood yihiin sharci darro baahsan oo saameyn culus yeelan karta.
Hanti Dhawrku ma baarin sidda ay sheegeen Madaxtooyada Soomaaliya, waxaana ay dad badan rumeysan yihiin in loo tagi lahaa musuqmaasuq baahsan, haddii la baari lahaa goobahan iyo meelo kale oo hay’addaha dawladda ah.